- Betiravy 1kg
- Tantely 100g
- Voasary 3
- Karaoty ½ kg
- Paoma 3
- Voasarimakirana 1
- Tavoahangy vera 1
Sasana madio tsara ireo akora rehetra ary voasana sy tetehina araka izay mampety azy tsirairay avy.
Miaraka potserina anaty “mixeur” ireo akora rehetra.
Rehefa mahazo ranom-boankazo dia araraka ao anatin’ilay tavoahangy ary tehirizina ao anaty vata fampangatsiahana.
Sotroina isa-maraina, adin’ny iray mialoha ny sakafo ity zava-pisotro ity ka tapaky nyvera isan’andro no sotroina.
Ø Manan-karena mineraly, vitamina ary “antioxydants” ny betiravy ka misoroka ny aretin’ny fo sy ny lalan-dra.
Ø Mampakatra ny hery fiarovana ao anatin’ny vatana ny tantely noho izy ahitana kalsioma, fer, manezioma ary faosfaoro.
Ø Ambony ny fatran’ny vitamina B1, B5, B9, C ary kalsioma ao anatin’ny voasary ka miady amin’ny fahanterana aloha loatra izany.
Ø Mampakatra ny hery fiarovana, miady amin’ny rarin-tsaina, misoroka ny mikraoba samihafa ny otrikaina ao anatin’ny karaoty.
Ø Ankoatra ny vitamina sy ny mineraly dia manan-karena fibra ny paoma ka mahamandina ny hoditra sy manamora ny fiasan’ny taovam-pandevonan-kanina.
Ø Misoroka ny karazana aretina toy ny gripa, ny fiakaran’ny tosi-dra ny voasarimakirana ary manamora ny fiasan’ny taovam-pandevonan-kanina.